भटौली खोला थुनेर खाँडादेवी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउ « Ramechhap News
भटौली खोला थुनेर खाँडादेवी गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउ
आदरणीय आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदि बहिनी, पार्टी कमिटिका नेतागण जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुज्यूहरु,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्ने यो पहिलो अवसर हो । फेरि यस्तो अवस्था नआउन पनि सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति पछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनद्वारा निर्मित नेकपाको स्थानीय सरकार र जनाताको अपेक्षा अनुरुप हामीले गरी रहेको कामको सन्दर्भमा पार्टी र सरकारबीच आपसी हार्दिकता सहितको समन्वय र सहकार्यको नियमित समिक्षा गर्न जरुरी हुने गर्दछ । त्यसैले आवश्यक सल्लाह सुझाबको अपेक्षा सहित केही कुरा अगाडि सार्ने अनुमति चाहन्छु ।
सडक छ, विद्युत छ, खानेपानी छ,स्कुल छ, स्वास्थ चौकी छ, अस्पताल बन्दै छ, सहकारी सस्था छ, बैक छ, बजार छ्, होटेल रेस्टुरेन्ट समेत छ् । यसो हेर्दा हाम्रो गाउँ शहर बन्दै छ । के हामीले खोजेको समाज यही हो त ? पक्कै पनि बहुसंख्यक जनताले खोजेको यही हो र पनि हामीले निर्माण गर्ने समाज संबिधानले परिकल्पना गरेजस्तो समाजवादी मोडेलको हुनु पर्ने छ । हाम्रो निर्माणले भौतिक पूर्वधार तयार गरेको छ । अब हामीले छनौट गर्ने योजनाहरुले जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउनु पर्यो । पहिले–पहिले गाँस बास कपास भनिन्थ्यो । हिजो आज गुणस्तरीय प्रबिधिक शिक्षा, रोजगारी, प्रविधिमैत्री स्मार्ट भिलेज, शुलभ स्वास्थ, सुरक्षा, समग्रमा सुख र शान्ती चाहन्छन् ।
तर आज कोरोनाको कारण फेरि पनि नेपालीको माग गाँस बास कपास नै बन्न पुगेको छ । स्थानीय सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा दिर्घकालिन लक्ष्यसहित गरिनु पर्यो । जुन परियोजनाले हाम्रा गाउँ घरमा बस्ने मानिस आत्मानिर्भर बन्न सकोस । एकल महिला भएर पनि म मेरो गाउँमा जिउन सक्छु भन्ने अवस्था निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । त्यसैले अब हामीले हाम्रो जग्गा जमिनलाई पूर्ण रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । नारा भाषण र गफममा होइन व्यवहारिक रुपमा नै ।
जमिन बाँजो राखे जरिबना गर्ने खेती गर्नेलाई सिंचाइँको व्यवस्था गर्नुपर्छ । खेतीयोग्य जमिन भन्दा माथि ठुला पोखरी निर्माण गरिनु पर्छ । आकाशको पानीलाई जमिनभित्र पठाउने गरियो भने सुकेका पँधेरो, कुवा, जरुवा, खोल्सीहरु रसाउने छन । सुख्खा क्षेत्रमा समेत बाख्रा कुखुरा पालन र वसिलो ठाउँमा तरकारी फलफुल तथा गाई भैसी पालन गराउन सकिन्छ ।
भटौली खोलामा ड्याम बनाउने गौरबको आयोजना सुरु गरी सुख्खा बारीलाई खेतको रुपमा बिकास गरी व्यवसायिक कृषि उद्योग वा पेशा गर्नेको लागी जमिन उपलब्ध गर्नु ठूला आयोजना सचालन गरिनु पर्दछ । यस्ता ठूला आयोजनाले धनीलाई झन धनी र गरीबलाई झन गरीब बनाउने खतरा रहन्छ । यो पुँजीवादी व्यवस्थाको उपज हो । हामीले ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नुपूर्व अधिग्रहण गर्ने र विकसित गरेर समानुपातिक वितरण गर्ने नीति लिनु पर्दछ ।
कृषिलाई निर्वाहमुखी नभै नाफाको ग्यारेन्टी गर्ने गरी उचित मु्ल्यमा उत्पादित सम्पूर्ण वस्तु खरिद गरिदिने ग्यारेन्टि स्थानीय तहको सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो परिवारलाई त्यागेर जीवनलाई बिर्सेर ४५ डिग्रीको तातो घाममा १८ घण्टा काम गर्न बिदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।
दिर्घकालिन नीति र योजनाको साथ सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रम सफल बनाउन सकेको अवस्थामा हाम्रो गाउँघरमा उत्पादन हुने अर्गानिक कृषिजन्य वस्तु विश्वबजारमा विक्री गर्न सकिन्छ । यदी सकिएछ भनेपनि कम्तिमा आयतलाई रोक्न सकिन्छ । जसको कारण व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । दस बर्षे दिर्घकालिन लक्ष सहित लागियो असम्भव छैन् । स्वर्ग बन्छ हाम्रो देश । आत्मनिर्भर बन्छ हाम्रो गाउँ । आज अष्टे«लियाले कृषि गर्दैछ । विकसित मूलुक चिनले स्याउदेखि अदुवा र लसुन समेत विश्व बजारमा पठाइ रहेका छन् । हाम्रो शहरमा रहनेहरुले खाने स्याउ, अदुवा, लसुन सबै छिमेकी देश चीनकै हो ।
त्यसैले अब अलमल गर्ने बेला छैन् । दोधारमा पर्न जरुरी नै छैन् । ढुक्क भएर कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउने योजना र कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्छ । जनताको आजको माग र आवश्यकता त्यति हो । कृषि क्षेत्रको विकासको योजनामा जनताको साथ र सहयोग रहन्छ । कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउने योजना र कार्यक्रम बनेनन भने आमुल परिवर्तन सम्भब हुँदैन ।
चिसापानीको पोखरीलाई कम्तिमा २० फिट गहिरो बनाएर बर्षातको पानी संकलन गरौ त भिरपानीको नाम रहेको पहरोमा पानी आउछ कि आउदैन ? सुलिथुम्काको पानीलाई गोगनपानीको जङगलमा जम्मा गरौ । गाल्बादेखि खाँडादेवीसम्मको पानी संकलन गरौं । यो प्रविधि लिफ्ट सिँचाई भन्दा धेरै गुणा राम्रो र कम खर्चिलो हुनेछ । कुतुर्सा र खत्रीगाउँ आदि लगायतको ठाउँ उपयुक्त हुन सक्छ ।
भटौली खोलाको शिरमा मिलर वाटर वाटरको फ्याक्ट्री खोलौ । अबको पाँच बर्षमा हाम्रा नगरिकहरुले धाराको पानी खान छोड्ने छन । सुक्खा सान्ने राम्चे, लाप्का भलाखर्क, थारे, सिखडाँडा, बेलघारी,चापडी, लगायतका ठाउँलाई परम्परागत खेती गर्ने होइन, ती ठाउँमा बाख्रा कुखुरा पालन क्षेत्रको रुपमा विकास गरौं । रस्काडा, खरी ढुङ्गा बिकट छ् । ती ठाउँमा खरिका कच्चा समाग्रीको रुपमा खरी बिक्री गर्ने, मौरी पालन गर्ने र गागल र पिङखुरी मूलतः पशुपालन र फलफुल तरर्कारी क्षेत्रको रुपमा विकास गरेर लैजानु पर्छ । हैन भने, फेरि पनि बिउ बिजन बाड्ने, सीपमूलक तालिम दिने, गोष्ठी सेमिनार गर्ने र भ्रमण गरी बस्ने हो भने नयाँ समाजको निर्माण हुन सक्दैन ।
हेटौंडा ७, असोज बागमती प्रदेश सरकारले उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध
१ करोड ४६ लाखमा सुनापती गाउँपालिकाको भवन निर्माण हुँदै
६ असोज, रामेछाप । सुनापती गाउँपालिकाले नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ